"प्रेमी-प्रेमिका जिस्के जसरी संविधानको अनादर गरि सपथ लिईनु अपराध हो" - डा. आचार्य - Sabda Nepal
“प्रेमी-प्रेमिका जिस्के जसरी संविधानको अनादर गरि सपथ लिईनु अपराध हो” – डा. आचार्य
२०७८ जेष्ठ ४, मंगलवार १४:०१ गते
रास्ट्रपति – प्रतिज्ञा गर्छु
प्रधानमन्त्री – …… (चुपचाप)
रास्ट्रपति – प्रतिज्ञा गर्छु(भन्नुस)
प्रधानमन्त्री – त्यो (प्रतिज्ञा गर्छु) पर्दैन
रास्ट्रपति – हि हि…
काठमाडौं । उल्लेखित संवाद कुनै सामान्य बार्तालाप होइन । नत कुनै प्रेमी-प्रेमिकाको जिस्काई नै हो । यो त देशका प्रधानमन्त्रीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले देखाएको सार्वजनिक हर्कत हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानबिद भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहणको क्रममा देखिएको दृश्य कुनै प्रेमी-प्रेमीका जिस्किएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन । सामाजिक संजाल ट्विटरमा “प्रेमी-प्रेमिका जिस्के जस्तो गरेर संविधानको अनादर गरि सपथ खुवाउने र सपथ लिने कार्य सामान्य होइन” भन्दै आचार्यले कडा बिरोध जनाएका छन् ।
रास्ट्रपति पदको समेत अपमान हुने गरि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही रास्ट्रपति कार्यालयमा भएको आफ्नो सपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुलुक र जनताप्रती बफादार भै सत्य निष्ठा पुर्वक “प्रतिज्ञा गर्छु” यहि प्रतिज्ञा गर्छु भन्न मानेनन् । राष्ट्रपतिलाई उनले भने “त्यो पर्दैन।” त्यसपछि जिस्केको शैलीमा राष्ट्रपति भण्डारीले हि हि… गर्दै हांसेर टारिन् । यसरी प्रधानमन्त्री ओली र रास्ट्रपति भन्डारीले संबिधान बमोजिम सपथ ग्रहण नगरेर/नगराएर राज्यबिरुद्दको अपराध गरेको संबिधानबिद आचार्यको आरोप छ ।
संविधानविद डा. आचार्यले
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर कारवाही गर्न माग समेत गरेका छन् । संविधान र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु राज्य बिरूद्धको अपराध हो’ उनले भनेका छन् ।
”प्रेमी-प्रेमिका जिस्के जसरी संविधानको अनादर गरि सपथ लिईनु अपराध हो” – डा. आचार्य
स्मरण रहोस, गणतन्त्र नेपालका पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ गते हिन्दी भाषामा शपथ खाए । राष्ट्रपति डा. यादवले नेपालीमा खुवाएको शपथलाई झाले हिन्दीमा पढेका थिए । हिन्दी भाषामा सपथ खाएको भनेर सर्वाेच्चमा रिट पर्‍यो । सर्बोच्चले नेपालीमा सपथ लिए मात्रै पद कृयाशिल हुने भनेर फैसला गरेपछी झाले पाँच महिनापछि फेरी शपथ लिएका थिए ।
प्रकाशित : २०७८ जेष्ठ ४, मंगलवार १४:०१ गते